Shikhar Samachar | ओलीलाई किन घाँडो भयो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ ? ओलीलाई किन घाँडो भयो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ ?
प्रकाशित मिती: २०७७ कार्तिक १८
संसदले गर्ने काम सरकारले गर्‍यो र संविधान संशोधन नै मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने हो भने संसदको काम के ?
काठमाडौं । नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकोटबाट भनेका थिए, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्‍न सकिन्‍न’ । उनको यो अभिव्यक्ति संघीयता विरोधी भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । उनले नेपालमा संघीयता आवश्यक नभएकोसमेत बताएका थिए । अहिले उनले भनेविपरीत मुलुक संघीयतामा गएको छ भने मुलुकमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शासन व्यवस्था छ ।
जुन शासन व्यवस्थालाई मान्दिन भनेर फरक विचार राखेका थिए अहिले त्यही शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । उनले यसअघि पनि विभिन्‍न पटक प्रदेशहरुको अवमूल्यन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए भने उनले गर्ने व्यवहारले त्यो देखाएको छ । प्रदेशको राजधानी छनोट गर्दा होस् अथवा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्‌ हेरफेर गर्ने कुरामा होस्, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय गरिएको अर्को निर्णयले ओलीलाई संघीयता घाँडो नै भएको देखिन्छ । उनले कानुन मन्त्रालयबाट नै निर्णय गराएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्‍न निर्देशन दिएका छन् ।
११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्‍ने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्‍ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्‍ने मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको कानुन मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, यो निर्णय सरकारले गोप्य नै राखेको थियो । सरकारले आफ्नो मातहतमा जारी गरेको सर्कुलरमा ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ लेख्‍ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्‍न’ निर्देशन दिइएको छ ।
संविधानविद् र राजनीतिशास्त्रीहरुले भने सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाटै संविधान संशोधन गर्न थालेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यस्तो गम्भीर निर्णय गर्दासमेत जनतालाई थाहा नहुनु थप गम्भीर भएको र सरकारले असंवैधानिक कदम थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानविद्हरूका अनुसार यो संविधानले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने अधिकार नदिएकोले यस्ता निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले संसदले गर्ने काम सरकारले गर्‍यो भने संसदले के गर्ने भन्दै प्रश्‍नसमेत गरेका छन् ।